Nkà na ụzụ na-abawanye ụba na ịgba chaa chaa na ntanetị n'ịntanetị | Site na Linux
Ole na ole ọrụ taa na-aga ọsọ ọsọ dị ka ịgba chaa chaa n'ịntanetị na ịkụ nzọ. Ihe a na-agbada n'otu ụlọ n'otu obodo, taa na-enye ọtụtụ ọnụọgụ nhọrọ maka ndị hụrụ ego dị mfe na adrenalin nke ụdị egwuregwu ndị a na-emepụta. N'ahịa ebe ọchịchọ maka ngwaahịa, ọrụ na ihe ọmụma na-arị elu, teknụzụ na-akwụghị ụgwọ na-apụta iji merie ahịa n'ụwa niile. N'ebe a, anyị na-agwa gị ihe ị kwesịrị ịma banyere ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-egwu egwuregwu ndị dị na casinos ma na-atụ ụjọ banyere ọnụọgụ ndị ị nwere ike ịchọta ebe ahụ, casinos n'ịntanetị nwere ike ịbụ azịza gị. Legkwụ nke okpokoro sara mbara nke egwuregwu nke ohere na-enwetawanye nkwanye ugwu karịa ndị ọzọ ma ewere ya dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ nwere ikike ịbawanye ụba maka afọ ndị na-abịanụ. Echiche a na-agba ume na-achọ itinye ego na gburugburu ụwa na ụfọdụ ndị mmepe mmepe emepe ahụla niche na-eme nke ọma na mpaghara a iji kwupụta azịza ha, na-emepe ihe ọmụma ha na nke a na-ere ahịa na ịrị elu.
Na ntụziaka ahụ, ọtụtụ microservices na ngwa ngwa na-emeghe emeghe apụtawo na ndị ọkachamara n'inye ihe ngwọta maka nyiwe egwuregwu, ha sitere na obere edemede nke na-ekwe nkwa na enweghị ike imebi nyiwe cha cha n'ịntanetị na algorithms iji gbakọọ akpaka ụzọ uru oke nke ndị ọrụ. N'otu ụzọ ahụ, enwere ọtụtụ ọrụ mmeghe na-emeghe maka ndị egwuregwu, ebe ha na-enweta ọrụ maka nyocha nke egwuregwu, amụma nke nsonaazụ ma ọ bụ naanị maka ọnụ ọgụgụ izugbe.
Ugbu a enwere ugbua nyiwe egwuregwu dị iche iche na-agba ọsọ na LinuxMa na igwe eji arụ ọrụ ọdịnala yana na cha cha chara ama n'ịntanetị, na njedebe nke mmetụta nke teknụzụ n'efu bụ nke ka ukwuu, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ndị a na-agba ọsọ na ntanetị ntanetị anaghị akwụ ụgwọ na GNU / Linux sistemụ arụmọrụ. , na mgbakwunye na iji usoro, asụsụ mmemme na ọdụ data nke anaghị adịkarị.
Ọ bụ ezie na, ruo mgbe 2012, ịgba chaa chaa n'ịntanetị abụghị ọrụ a na-achịkwa nke ọma, mmụba uto nke alaka a nwere n'ime ịgba chaa chaa amanyela anyị ịtụgharị uche n'okwu a ma debe iwu na nke a, yana iji melite ikike teknụzụ nke Platform, n’otu aka ahụ, emeela ka okwu nke adịghị ike mụbaa, ndị egwuregwu emeela ka ikike ha ka mma ka ha kwekọọ na usoro egwuregwu ndị a. Ekwesịrị ijide ihe ịga nke ọma site na ụlọ ndị mebere emepe site na obodo sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, iji nweta ụzọ ntinye ego ọhụụ wee mee ka ojiji ha bụrụ ihe ama ama.
Otu n'ime teknụzụ gbara gburugburu ịgba chaa chaa ebe teknụzụ n'efu na-emetụta bụ na ngwa maka ndị ọzọ, nke a doro anya na eziokwu a bụ na 40% nke uru ugbu a nke cha cha cha cha cha sitere na smartphone, ya mere, ọ bụ mpaghara ebe mmalite nke teknụzụ anaghị akwụsị ma a ga-emelite ya oge niile.
Free technology na-kpọrọ, n'etiti ndị ọzọ, n'ime ụwa nke cryptocurrencies iji zere nnukwu afụ na-agbawa n'anya anyị, yana iji akụnụba ego ọhụrụ a wee malite ịmalite itinye ego na ọrụ ọhụụ.
Teknụzụ ndị a na-akwụghị ụgwọ eji eme ihe na casinos enweghị ihe ọ bụla nwere anyaụfụ na teknụzụ nwere ikike nke a na-eji na isi casinos gburugburu ụwa. Na nchịkọta, mgbe nnukwu cha cha ọhụrụ mepere na mba na-abata, a na-anụ asịrị na enwere teknụzụ n'efu na-emetụta nsogbu cyber ha ozugbo, ebe ha nwetara ọmarịcha ama n'ọhịa. Dịka ọmụmaatụ, enwere saịtị na-enyocha teknụzụ ndị a na ihe niile na-akwado ọrụ nkịtị nke cha cha n'ozuzu.
Ugbu a na ị maara, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịbanye n'ime ụwa nke casinos na online casinos, buru n'uche ịlele akụkọ kachasị ọhụrụ na teknụzụ na-akwụghị ụgwọ na weebụsaịtị ndị ọkachamara na ya. Ọrụ gara aga ga - enyere gị aka ịmara ọtụtụ ndị na - asọmpi gị ọtụtụ ozi bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » Teknụzụ efu na-abawanye mmetụta ya na ịgba chaa chaa n'ịntanetị na ịkụ nzọ